8 tilmaam si aad ugu labisto suud MUHIIM AH! | Ragga Stylish
Sawirka meeleynta Carlos Rivera | | fashion, Isbeddellada
Dad badan, xirashada suud waa ficil maalin walba la sameeyo sababo shaqo awgood. Dadka kale, waxay si fudud u tahay marmar marmar ah sabab gaar ah. Sikastaba, waxaan dhamaanteen dooneynaa inaan kaamil noqnoqonno markay tahay xirashada suud.
Waa hagaag, qof walba, waxaan u abuurnay tan gaarka ah oo aan ku marayno sideed tilmaam qaabeed, 'xeerarka' aanan ka boodi karin marka ay timaaddo xirashada suud. Sideed Tilmaamaha qaabka qorraxda ee aasaasiga ah oo aan isbeddel ku sameyn doonno. Shaki la'aan, qeexida dejinta ee saxda ah.
1 Xulo ku habboon habboon
2 Xulo cabirkaaga saxda ah
3 Ka tag badhanka ugu dambeeya ee jaakada
4 Guji si aad u fadhiisato
5 Fiiro gaar ah u yeelo shaati gacmeedyada
6 Qalabka: midka kaliya ee lagama maarmaanka ah
7 Sida laysugu daro kabaha iyo suudhka
8 Fiiro gaar ah u yeelo faahfaahinta yar
Xullo ku habboon ku habboon
Mango Man suud joogto ah
Suudh jilicsan oo jilicsan by Topman
Asos maqaar ku habboon maqaarka
Waa waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ka fikirto markaad labbisayso suud. Muxuu yahay goynta igu habboon aniga, waa maxay ku habboon taas ayaa igu habboon aniga sawir. Waan kala qaybin karnaa fittings saddex baloog oo kala duwan: taam joogto ah ama goynta caadiga ah, dhejis ama silhouette lagu rakibay oo la gooyay oo ugu dambeyntii maqaar ku habboon ama goyn aad u adag. Qoraalka gaarka ah ee ku saabsan sida wanaagsan ee loo labisto waxaan ku sameynay a dib-u-eegista jarista weyn ee sharraxaadda si faahfaahsan. Hadaad doorato ku habboon hagaagsan tahay inaad horey u haysatay kala bar shaqadii la qabtay.
Xulo cabirkaaga saxda ah
Tirada saxda ah
Sideen ku ogaadaa haddii jaakaddaydu i habboon tahay? Waxa ugu muhiimsan ee jaakad suud ah waa garbaha. Haddii ay isku dhegaan, waxaad u baahan tahay cabbirro ka yar. Garabka suudku waa inuu ku dhacaa garabka dabiiciga ah iyo, marka lagu daro, waa inay ka sarreysaa iyada oo aan si xad dhaaf ah u soo bixin. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad awood u leedahay inaad xirto badhanka dhib la'aan.
para surwaalkii, wax sax ah waa inay sameeyaan hal laab markii ay ku tijaabinayaan kabaha. In kasta oo, ay run tahay, in muddooyinkii dambe suudhadhka suunka leh aad ugu dhow oo kabaha lagu sii daayo ay noqdeen kuwo moodada ah. Intaas waxaa sii dheer, waa in lagu xisaabtamo in maanta noocyo badan ay leeyihiin laba cabbir dherer surwaal ah oo badanaa lagu calaamadeeyo xarafka R, dhererka caadiga ama caadiga ah; iyo L, sida cabirka ugu dheer. Sidaa darteed, tusaale ahaan, nin qiyaastii ah 70 kiilo oo dhererkiisuna yahay 170 sintimitir wuxuu xidhan lahaa cabbir dhan 40R oo surwaal ah, halka haddii uu ahaan lahaa nin qiyaastii 75 kiilo ku dhow 185 sentimitir dherer ahaan, wuxuu xiran lahaa 40L.
In kasta oo nuqsaan ay jirto, waxaa jira kuwa u baahan kara inay beddelaan dharka haddiiba ay dhacdo inay heli waayaan dhererka ugu habboon ee cabirkooda gaarka ah. Ku dhejinta hoose ee surwaalka cabbirkayaga saxda ah waxay ka dhigi doontaa inay u muuqato mid ku habboon dhererkeenna oo maaha sidii inay iyagu ammaahdeen.
Ka tag badhanka ugu dambeeya ee jaakada
Waxaa jira sharci mnemonic ah oo ka shaqeynaya inuu na xusuusiyo sida loo dhejiyo jaakad suud ah. Jaakad saddex-batoon leh - tii ugu badnayd - waa inaan mar walba ku dhejino kan sare, mararka qaarkood midka dhexe oo aan waligood ka hooseyn. In kastoo, maaddaama ugu habboon ee maanta ugu caansan ay yihiin labada badhan, marwalba waan xireynaa kan kore oo kan hoose ayaan furaneynaa. Arinta ah jaakadaha badhanka hal - kaas oo badanaa ku dhaca suudhadhka ugu casrisan uguna jaban maqaar ku habboon - waa weli had iyo jeer xiranin aynaan fadhiisan mooyee, taas oo inoo keenaysa barta xigta.
Guji si aad u fadhiisato
Waa muhiim marka aad sidaas u fadhido Aynu furano dhammaan badhannada ku yaal jaakadda xitaa haddii ay noo muuqato inaan ka raaxo badan nahay ama ka fadli badan nahay iyaga mooyaane. Dhanka kale, haddii aad xirto suud leh jaakad u dhiganta, badhamada isku mid ah had iyo jeer way sii jiri doonaan dhammaantoodna waa la dhajiyay, haddii aad fadhido ama aad istaagto, sida aan ku aragno sawirka sadarradan. Faahfaahintaan yar waxay farqiga u dhaxeysaa nin garanaya sida loo xirto suudka iyo midka aan u baran inuu sidaa sameeyo.
Fiiro gaar ah u yeelo shaati gacmeedyada
Midkoodna ma ahan in shaati-yada oo dhan ay soo baxaan, sidoo kale jaakadku ma ahan inuu daboolo galka oo dhan. Way ku habboon tahay in shaatigu soo baxo ugu yaraan hal far, taas oo noqon laheyd wax ka yar ama ka yar labo sentimitir. Tani waxay muujineysaa in dhererka gacmaha jaakadku ay ku habboon yihiin cabirkeenna.
Waqtiga xaadirka ah, Isla cabirka jaakad ahaan, noocyo badan ayaa leh laba cabbir ama xitaa saddex dherer. Tusaale ahaan, haddii cabbirka jaakadkeennu yahay 48S, waxay ka dhigan tahay inuu yahay kan ugu yar cabirkan dhexdiisa, cabbirka xiga wuxuu noqonayaa 48R, kaasoo tilmaami lahaa dhererka caadiga ah ama midka caadiga ah iyo, ugu dambeyn, 48L oo tilmaamaysa inay tahay cabirka lagu daray dheer oo dhan 48.
Qalabka: midka kaliya ee lagama maarmaanka ah
Mawduuca qalabka waa inaad noqotaa mid caddaalad ah oo sax ah, taasi waa, ka yar ayaa badanaa shaqeynaya markaan xirno suud. Marka lagu daro xarigga, xarigga qaansada ama dhejiska dhabta, waxaa jira noocyo kale oo qalab ah sida biinanka dhabta ah, xarkaha yar yar, ama isku xidhka shaashadda. Qalabkan waa inaad taxaddar muujisaa maadaama ay wax badan ka buuxin karaan fiiri iyo, marka la adeegsanayo iyaga, waa ka fiican tahay dooro nashqado miyir leh iyo mid yar - sida kuwa aan ku muujineyno xariiqyadan hoosta - halkii laga ahaan lahaa mid caan ah oo leh qalab weyn iyo baroque.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, haddii, tusaale ahaan, aan doorano xarig aad u xiisa badan, gogosha dhabta ah, marka la eego xirashada, waxaa aad loogu talinayaa inay noqoto mid dhex dhexaad ah iyo inaad awood u yeelatid inaad ahaato mid siman. Haddii, dhinaca kale, aad dooratay shaashad isku xiran oo aad u muuqata, diid isticmaalka baarka xarigga ama biinanka dhabta. Micnaha waa cabirka. Isku day inaad sameysid isku dheelitirnaan dheellitiran iyo in qalabku uusan hadhaysanayn suudhka laakiin kor u qaad. Markii aad shaki gasho, dooro xarig wanaagsan oo iska ilow inta kale.
Sida laysugu daro kabaha iyo suudhka
Kabo iyo midabbo suud ah
Kabo u dhigma midab ku habboon Waa mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan, qaar badanna, badanaa waa madax-xanuun dhab ah. Sidaa darteed, waxaan soo bandhigeynaa dhammaan iskudhafka kabaha suurtagalka ah oo leh noocyo aasaasi ah oo ku habboon oo nin walba leeyahay.
Guud ahaan, suudhadhka madow, kabaha isku midka ah oo kaliya ayaa u muuqda kuwo wanaagsan, taas oo ah, madow. Iyada oo leh dhar mugdi ah oo mugdi ah, kabaha ku jira madow ama madow bunni ah ayaa si fiican u socda. Dhinaceeda, dharka dhexdhexaadka ah ee cawl waxaan xiran karnaa kabo madow, bunni mugdi ah, bunni khafiif ah ama xitaa geel iyo beige. Iyada oo ku habboon buluug dhexdhexaad ah, kabo madow, bunni mugdi ah, bunni khafiif ah ama caramel ayaa u muuqda mid wanaagsan. Ugu dambeyntiina, suudhadhka codadka dhulka waxaan ku sharraxnaa kabaha midab madow, buluug ama buluug mugdi ah. Ku saabsan suunka, in si sax ah loo helo waxaa ugu wanaagsan in lagu daro midab isku mid ah kabaha.
Kabo nadiif ah, dhalaalaya oo dhalaalaya ayaa lagama maarmaan u ah xirashada suud. Kuwani waxay beddeli karaan aragtida guud ee adiga fiiri haddii aysan xaaladoodu wanaagsanayn. Kahor intaadan labisan, ha ilaawin inaad kabahaaga xoqdo ama xadhkaha ka beddesho haddii ay duug yihiin. Sidoo kale, hubi in gunti xarkaha si wanaagsan loo qabtay iyo in xariggu xuddun yahay midig bartanka shaarka oo daboolaya safka badhanka oo dhan.
Oh, oo aad muhiim u ah! hubi inaad ka saartey dhamaan tolliimadka warshada taasina waxay u adeegtaa in la xiro furitaanka dhabarka jaakada. Waxay umuuqataa wax iska cad laakiin waxaa jira rag, oo aan u baran in ay xirtaan suudhka, u maleeya in tolitaankan ujeeddo laga leeyahay, sidaad ogtahayna waxay ku saabsan tahay faan-furka taas oo dharka ka dhigeysa mid aan isbedelin markay dukaanka yimaadaan.
Faahfaahinta sida kuwa aan soo jeedineyno waxay kaa dhigi kartaa inaad u ekaato cows ama, liddi ku ah, sida kor u kaca oo aan aqoon sida loogu labisto suudh. Marka lagu daro faahfaahintaan yar, dabeecaddu aad ayey muhiim u tahay oo isbeddel ayey keenaysaa, socodka toosan iyo muuqaal toosan ayaa suudhkaaga ka dhigi doonta mid ka muuqda dhammaan quruxdiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » 8 tilmaamood oo qaabka loogu talagalay xirashada suud